आश्चर्यजनक भेट, अनुत्तरित प्रश्न « Naya Page
आश्चर्यजनक भेट, अनुत्तरित प्रश्न
उहिलेको विषयमा अहिले भेट
काठमाडौं, ११ फागुन । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाबीच भएको भेटले राजनीतिक वृत्तलाई तरंगित बनाएको छ । भेटलाई कतिले स्वाभाविक मानेका छन्, कतिले संशयको दृष्टिले अर्थ्याएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले अहिले फैसला दिने तयारी गर्दैछ, तर पूर्वसन्ध्यामा प्रधानन्यायाधीश र प्रधानसेनापतिको भेट स्वाभाविक हो ? धेरैले आशंका गरेका छन् । प्रधानन्यायाधीश जबरा र प्रधानसेनापति थापाबीच सोमबार दिउँसो एक बजे सर्वोच्च अदालतमा भेट भएको दुवै निकायले पुष्टि गरेका छन् । तर, उनीहरूले सर्वोच्चको नयाँ भवन बनाउने जग्गाको विषयमा मात्र छलफल भएको जानकारी दिएका छन् ।
सर्वाेच्च अदालतका सञ्चारविज्ञ किशोर पौडेलले प्रधानन्यायाधीश र प्रधानसेनापतिबीचको भेटघाट औपचारिक भएको र सर्वाेच्च अदालतले भवन बनाउन लागेको जग्गाको विषयमा सम्बन्धित भएको बताए । उनले भने, ‘यो सर्वाेच्च अदालतले बोलाएको औपचारिक भेटघाट हो । सर्वाेच्च अदालतले भवन बनाउन लागेको स्थानमा सेनाले आफ्ना संरचना समयमै नहटाउँदा ढिलाइ हुन सक्ने भएकाले सहयोग गरिदिन प्रधानसेनापतिलाई आग्रह गरिएको हो ।’
सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी सन्तोषबल्लभ पौडेल भन्छन्, ‘भेटका उद्देश्य प्रस्ट छन् । सर्वोच्चको नयाँ भवन बन्ने जग्गाका सम्बन्धमा छलफल भएको हो । सेनाको क्याबलरी रहेको ३७ रोपनी जग्गामध्ये नौ रोपनी जग्गा सर्वोच्चबाट हामीसँग माग भएको हो । त्यसमा कम्प्लेक्स बन्ने विषय सार्वजनिक नै छ । यही जग्गा हस्तान्तरण गर्न चिफ सा’ब सोमबार सर्वोच्च पुग्नुभएको हो ।’ तर, उनले थप विषयमा बोल्न आवश्यक नभएको प्रतिक्रिया दिए ।
क्याबलरीको जग्गा सर्वोच्चलाई हस्तान्तरण गर्ने विषयमा छलफल भएको भन्ने विषयमा प्रशस्तै प्रश्न छन् । किनकि सर्वोच्च अदालतको पछाडिपट्टि सेनाको क्याबलरी राखिएको साढे ३७ रोपनीमध्ये नौ रोपनी जग्गा सर्वोच्चलाई दिने भन्ने विषयमा अहिले छलफलको सान्दर्भिकता नै छैन ।
क्याबलरीको जग्गा सर्वोच्चलाई दिने र त्यहाँबाट क्याबलरी हटाउने विषयमा सेनाले अहिले होइन, तत्कालीन प्रधानसेनापति छत्रमानसिंह गुरुङकै पालामा निर्णय गरेको हो । तर, यसको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार नेपाल सरकारको हो । सरकारले पनि अहिले होइन, तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाकै पालामा यो विषय टुंग्याएको हो ।
प्रधानसेनापति गौरवशमशेर जबराकै प्रस्तावपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाले मन्त्रिपरिषद्बाट यो जग्गा सर्वोच्चलाई दिने निर्णय गराएका थिए । लगत्तै सर्वोच्चका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले सो जग्गामा भवन निर्माणको शिलान्यास गरेका थिए ।
जग्गा निर्णय भए पनि क्याबलरी सार्न बाँकी विषयमा हो कि ? प्रश्न यो पनि उठेको छ । तर, सिंहदरबारको क्याबलरी नै अहिले नारायणहिटी सरिसकेको छ । त्यो पनि अहिले होइन, तत्कालीन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीको पालामा नै ।
यसरी पहिले नै टुंगो लागेको विषयमा अहिले दुई निकायका प्रमुखबीच भेट भनिएकोमा विज्ञहरूले पनि आश्चर्य मानेका छन् । सुरक्षाविद् गेजा शर्मा वाग्ले बैठकको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालत र जंगी अड्डाबाट सार्वजनिक भएको टिप्पणी कर्मकाण्डी भएको ठान्छन् ।
‘प्रतिनिधिसभा विघटनपछि नेपालको राजनीति अत्यन्त तरल र अन्योलपूर्ण भएको पृष्ठभूमिमा प्रधानन्यायाधीश र प्रधानसेनापतिबीचको आकस्मिक भेटले रहस्यमय र अर्थपूर्ण सन्देश प्रवाह गरेको छ,’ उनले भने, ‘बैठकको सम्बन्धमा सर्वाेच्च अदालत र जंगी अड्डाले अनौपचारिकताका लागि कर्मकाण्डी टिप्पणी गरेका छन् ।’
प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धमा परेको रिटमा सर्वोच्चले फैसला सुनाउने पूर्व सन्ध्यामा प्रधानन्यायाधीश र प्रधानसेनापतिबीचको बैठक राजनीतिक, संवैधानिक र सुरक्षाका दृष्टिकोणले अनौठो भएको उनको टिप्पणी छ ।
अर्का सुरक्षाविज्ञ इन्द्र अधिकारी पनि प्रधानन्यायाधीश र सेना प्रमुखबीचको भेटले खास सन्देश प्रवाह गरेको बताउँछिन् । यद्यपि, तरल राजनीतिक अवस्थाका क्रममा दुई प्रमुखबीचको भेटलाई स्वाभाविक मान्नुपर्ने उनको टिप्पणी छ ।
‘राजनीतिक अवस्था तरल भएको वेला दुई प्रमुखबीच भेट भएको छ । यसले खास सन्देश प्रवाह गर्छ । जुन निश्चय पनि जग्गासँग नभई सुरक्षासँग सम्बन्धित हुन सक्छ,’ अधिकारी भन्छिन्, ‘यहीबीचमा सशस्त्र र सेनाकै बीच बृहत् सेमिनार भएको छ । प्रहरी अधिकारी पनि सेमिनारमा सहभागी थिए । अर्कोतर्फ सोमबार प्रधानन्यायाधीशसँग पनि भेट भयो । निश्चय पनि यो मुलुकको सुरक्षाप्रति केन्द्रित छ । यसले खास सन्देश प्रवाह गरेको छ । किनकि यही वेला राजनीतिक अवस्था तरल छ ।’ नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
सुर्खेत, १५ मंसिर । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले बुधबार विश्वासको मत पाएका छन् ।
काठमाडौं, १५ मंसिर । भारतको तीन गन्तव्यमा नेपाल एयरलाइन्सको जहाजले सिधा उडान भर्ने भएको छ
एमालेको निम्तो छलेका प्रचण्ड राप्रपाको कार्यक्रममा : केपी र सीपीमाथि कटाक्ष
काठमाडौं, १५ मंसिर । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष ‘प्रचण्ड’ ले राप्रपा र आफ्नो पार्टीको विचार